ပျဉ်းမနားမြို့ သံဃာ့ဆေးရုံကြီးတွင် သံဃာတော်၊ သီလရှင်တို့အား အခမဲ့ဆေးကုသမှု ပေးနေသကဲ့သို့ေ- Yangon Media Group
ပျဉ်းမနားမြို့ သံဃာ့ဆေးရုံကြီးတွင် သံဃာတော်၊ သီလရှင်တို့အား အခမဲ့ဆေးကုသမှု ပေးနေသကဲ့သို့ေ
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၂
နေ ပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ သံဃာ့ ဆေးရုံကြီးတွင် သံဃာတော်၊ သီ လရှင်များအား အခမဲ့ဆေးကုသ ပေးနေသကဲ့သို့ ဝေဒနာရှင် ဒေသ ခံများကိုလည်း သင့်တင့်သက်သာ သောနှုန်းဖြင့် ဆေးကုသပေးနေ ကြောင်း အဆိုပါဆေးရုံအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့မှ သိရသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့ သံဃာ့ဆေးရုံ ကြီးတွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် သံဃာ့ဆေးရုံကော်မ တီ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၂ ရက်အ ထိ သံဃာတော်၊ သီလရှင်စုစုပေါင်း ၁၉ဝ၆ ပါး အပါအဝင် ဝေဒနာရှင် ပြည်သူများ စုစုပေါင်း ၃၃၇၈ ဦး တို့ကို ဆေးကုသပေးခဲ့သည်။
ယင်းသံဃာ့ဆေးရုံကြီးတွင် သံဃာတော်၊ သီလရှင်တို့ကို အခ မဲ့ဆေးကုသပေးပြီး ဒေသခံများ ကို သင့်တင့်သက်သာသောဈေးနှုန်း များဖြင့် ကျောက်ကပ်သန့်စင်ရေး၊ အထွေထွေရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ နားနှာခေါင်း၊ ဆီးချို သွေးချို၊ အ ကြောအဆစ်၊ မျက်စိရောဂါ၊ ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်၊ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ဓာတ် မှန်ခန်းနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးများက အပတ်စဉ်ကုသပေးလျက်ရှိပြီး ၂၄ နာရီ ဆေးဝါးကုသနိုင်ရေးအတွက် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုအင်အား ဖြည့်တင်းခြင်းများကို နိုင်ငံတော် သြဝါဒါစရိယ ဈေးကုန်းဆရာ တော်နှင့် မြို့နယ်သံဃနာယက ဆရာတော်ကြီးများထံမှ သြဝါဒ ခံယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ပျဉ်းမနားမြို့ သံဃာ့ဆေးရုံ ကြီးတွင် သြ ဂုတ် ၂၂ ရက် နံနက် ပိုင်းတွင် သံဃာတော်များအား ဝါ ဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြသလွန် စေတီရင်ပြင်ပေါ်ရှိ မဟာအတုလရံသီ တန်ဆောင်းတော်ကို မြန်မာမှုများဖြင့် မွမ်းမံပြင်ဆင်လ?
ရှေးဟောင်းမြို့ရိုးဘေး မြေယာချပေးမှု ရှေးဟောင်းမြေ ပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ သက်ဆိုင်ရာမှ ကွင်းဆင်??
အထောင်မြို့တွင် တစ်ပတ်ခန့် ပျောက်ဆုံးနေသည့် အမျိုးသမီးကို ကြိုးတုပ် အသတ်ခံရသည့်ပုံစံဖြင်?
ဥရောပနိုင်ငံများသို့ နှစ်စဉ် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တင်ပို့နေရသော မြန်မာ့ကော်ဖီ ရခိုင်အရေးနှ
တားဆီး၍ မရသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကို အကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေကို သုံးချင်တိုင်း သုံး?
သီရိလင်္ကာ ဗုံးခွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် မလေးရှားက ဘာသာရေး အဆောက်အအုံနှင့် သံရုံးများတွင် လြုံ
အညာဒေသ အငွေ့အသက် အပြည့်ရှိသော ဖိုးဝင်းတောင် ဘုရားပွဲတော် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနေ